Ukuze uthole kusayithi, isiphequluli liyadingeka ukufaka igama lakhe domain. Ngokuvamile abantu abhekisela kuso ngokuthi igama lesayithi. isizinda ngayine inezidingo zayo ikheli le-inthanethi le-IP yayo. ukukhuluma kuqhathaniswa, kukhona uhlu ekhethekile amagama wesizinda namakheli abo ofanayo. Njengoba yaziwa, yiluphi ulwazi kufanele abe isikhala isitoreji. Kuyefana nasendleleni Kulolu hlu olungenhla oluhambisana. Ukuze uwugcine amaseva ekhethekile okuthiwa i-DNS (Domain Name System). Kuyinto umsebenzi-DNS amaseva oyisebenzisa nsuku zonke, kodwa awuboni ke.
Siyaphawula ukuthi uhlelo igama lesizinda yasungulwa ngo-1983, futhi kwaba ngandlela-thile kabusha ebhalwe ngo-1990. Ukuthuthukisa izwe kufanele ngibonge uPawulu Makpertisonu. Nguye abenyukela umbono ukugcina irekhodi igama lesizinda, elifana notebook anezinombolo zocingo. Ngesicelo bakhe, abafundi abathathu abazoba kanye abathanda ingasebenza modified ikhodi. Okuholela uhlelo oneminyaka engu-90 sekuthandwa kakhulu futhi zisasetshenziswa nanamuhla.
Kukhona into okuthiwa i-DNS-igama. It kufanele licaciswe lapho kuqinisekiswa ukuthi domain, futhi yokubopha inqubo yayo kunoma ibamba.
Kwezinye izimo, kungase kudingeke ukuba bazi DNS, IP noma igama lesizinda kwalezi zinsiza. Ukucinga kuphumelela, umsebenzisi kumele ibe khona ulwazi oluthile namakhono. Zama ukuqonda ukuthi uthole i-DNS. Uma une ulwazi mayelana igama lesizinda futhi ube namakhono bokugcina-Inthanethi, i-DNS ukucacisa inkinga akufanele ukudala inkinga ngawe. Inethiwekhi has a lot of okuthiwa inkonzo buy.
Noma iyiphi indawo enjalo liqukethe ulwazi mayelana nokuthi kungenwa kanjani igama DNS kwesizinda. Ukuze wenze lokhu udinga ukuya ekhasini nombuzo, faka igama lesizinda elidingekayo bese uqale ukuskena. Waba yini umphumela wesibindi isayithi izobonisa ulwazi oludingayo. Njengoba isibonelo ungazama ukufaka esizindeni omunye izinjini owaziwa. Ngenxa yalokho, amakheli e-DNS-amaseva izotholwa, ngokuvamile ukuba nalolu hlobo: "ns1 ..., ns2 ..., ns3 ..."
Kwezinye izimo, i-DNS-umhlinzeki idinga ukwazi. Ngazi kanjani DNS ISP yakho? Ukuze wenze lokhu kuyodingeka ukuvula ngokushesha umyalo, faka umyalo "ipconfig / zonke" futhi uqinisekise abulawe yayo. Ohlwini ukubonisa ulwazi emkhakheni "DNS-amaseva" kuwo uzothola ukwaziswa okuningiliziwe, okuyinto edingekayo ukuze uthole. Ukuvula isexwayiso umyalo, kufanele ufake "Qala" imenyu, bese ukhetha imenyu "Run" bese uthayipha "cmd" e umyalo umugqa livela. Ngemva ngokucindezela "Faka" izovela ewindini black ngala mazwi - lena ngokushesha umyalo.
Uma ngasizathu simbe odinga ukukwazi IP-ikheli yithuluzi Inthanethi ke ukukwenza indlela elula ngokusebenzisa "ping" umyalo. Vula ajwayelekile kithi kakade isexwayiso umyalo bese ufaka umyalo ezifanele: "Ping ." Ngemva kokuqinisekisa entry ngeke ukushintshanisa amaphakethe idatha nge internet wakho isayithi nguwe. In the line wokuqala uzobona ikheli lakho ip.
Siye sazama ukuchaza izindlela ezilula kakhulu futhi okusheshayo sokunquma-DNS ikheli, futhi sethemba ukuthi le ndaba yokungaziphathi "Wazi kanjani-DNS?" Manje kuvaliwe kuwe.
Ukuze eside isitoreji solwazi yilokhu kudivayisi? Amafomu kolwazi isitoreji
"Ferrari F12": ukucaciswa, ukuklama, ingaphakathi ne-dynamics